I-El Lomon de los zipas amazonicos yindlu yelizwe esembindini wehlathi laseAmazon.
Iiyure ezi-2 kunye nesiqingatha ukusuka eLeticia ngesikhephe, kwaye uhamba imizuzu engama-20 ehlathini uya kufumana ifama entle, enendlu enkulu yokwabelana.
kunye neendlela ezinqumla ehlathini, imithi yeziqhamo, i-chagras (izityalo) kunye nembono entle yehlathi lase-Amazon. Yiza udibane neyona dolophu intle kwaye izolile kwiAmazon yaseColombia. Ngaba unobuganga bokuphila la mava amnandi?
Kumgangatho wokuqala, sinendawo yokudibanisa, apho sikhonza iziselo kwaye kukho indawo ebandayo ukuze ujabulele umthunzi, unekhitshi, igumbi lokudlela kunye negumbi lokuhlambela.
kumgangatho wesibini siya kufumana amanye amagumbi aneyawo yokuhlambela, iihammos zokuphumla, igumbi lokutyela.
umgangatho wesithathu unegumbi lokuhlambela, kunye nee-hammocks zokuphumla.
Kumgangatho ophezulu sinembono entle apho unokonwabela ukuphuma nokutshona kwelanga kwihlathi laseAmazon.
Sikwindawo ekhethekileyo eAmazon, iPuertonariño yidolophu entle engenazo iimoto okanye izithuthuthu. Imizuzu engama-20 uhamba uya kufumana ingalo yoMlambo i-Loretoyacu, apho unokubona khona ukushona kwelanga okuhle kakhulu, kunye needonphin kunye nezilwanyana ezininzi ezintle.
Siza kuzimasa ngalo lonke ixesha, siqinisekisa ukuba ukuhlala kwakho kukhululekile kangangoko, kwaye ungaphila amava okwenyani eAmazon, ngamaxabiso afanelekileyo, axhasa ngokwenene abantu bomthonyama bendawo.